Hayyamni Abukaatummaa Tamaam Abbaa Bulguu Dhorkame -
Hayyamni Abukaatummaa Tamaam Abbaa Bulguu Dhorkame
(Oromedia, 10 Adoolessa 2015) Ministeerri Haqaa Itoophiyaa ogummaa Abukaatummaatiin kan jiraatan obbo Tamaam Abbaa Bulguu Abbaa Diikoo gara waggaa lamaaf dhorkee jira.
Xalayaan Ministeera Haqaa irraa ba’e akka mul’isetti, yaa’iin namusaafi abukaatoota federaalaa eeruuwwan hanqina naamusaa abukaatichaa irratti dhiyaatan qorachaa tureera.
Akkaataa kanaan manni hojii ministeerichaa akkaataa labsii lakk.192/92 keewwata 24(3B2)’tiin obbo Tamaam baatii Waxabajjii bara 2015 irraa eegalee waggaa tokkoofi baatii torbaaf hayyama Abukaatummaa irraa fudhatee jira.
Xalayaan abukaatummaa isaanii dhorku kunis qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaaf akka kennames xalayaan ministeerichaa ba’e mul’iseera.
Ob Tamaam Abbaa Bulguu abukaatoo beekamaa kan haqaa fi dhugaaf falman, horiif kan hin bololle akka taán namooti isaan beekan ragaa bahu.
Previous Jala bultii daawwannaa prezidaant Obamaa gaazexeessonni fi barattoonni mana hidhaa Itiyoophiyaa keessa turan gad dhiisaman
Next Afanfaajjii Hubannoo Tokkummaa.